Safarka Madaxweynaha Iyo Siyaasadda Qaranka. W/Q Axmed Cali Sabayse. | Saxil News Network
Safarka Madaxweynaha Iyo Siyaasadda Qaranka. W/Q Axmed Cali Sabayse.
Wuxuu dadweynuhu u dhegtaagayey soo afjaridda arrinta Suldaan Wabar; nasiib darro natiijadii socdaalkii Madaxweyne Md. Axmed Maxamed Maxamuud ku tegey Gobolka Awdal wax midho ah oo la taaban karaa kama soo bixin oo xaalku waa halkiisii. Golihii u xilsaarnaa arrimaha noocan ihina kaalintiisii si badheedh ah ayuu u baal maray oo ummaddu way maqlatsey ereyadii ka soo yeedhay Guddoomiyaha Golaha Guurtida, Md. Saleebaan Maxamuud Aaden.
Waxa aynu shalay ( January 20, 2015) warbaahinta ku arkayney wefti uu hoggaaminaya Wasiirka Arrimaha Dibada Md. Maxamed Biixi Yoonis kana mid ahaayeen Dr. Sacad Cali Shire wasiirka Qoirsheynta Somaliland iyo Marwo adna aaden Ismaaciil oo hore u ahaan jirtey Wasiirka Arrimaha Dibada ee Jamhuuriyadda Somaliland. Waftigan waxay markii u horeysey kaga hor doodeen Barlamaanka Midowga Yurub Qadiyadda xaqa Madaxbannaanida iyo gooni isutaaga Jamhuuriyadda Somaliland.
Waa arrin cusub oo bedeleysa itijaahii iyo istraatiijaiyaddii ka midho dhalinta dib u cusboonaysiinta ictiraafkii iyo qarannimaddii soof-daran-habowday 1 July, 1960. Waa tallaabo hor leh oo maadaama wada hadaladii Somaliland iyo Somalia oo muddo afar sannadood ah soo jiitamayey ay natiijo la’aan ku soo afjarmayaan. In badan ayaa laga dayriyey wada hadaladaa dowlada Turkigu gadhwadeenka ka ahayd.
Hadaba iyada oo madaxweynuhu ogaa in arrinta baaxadda le’egi socotay ayaan waxaan marnaba caqli gal ahayn in Madaxweynuhu socdaal ku galaa bixiyo dalka gudihiisa bari ilaa galbeed. Malaha hadday ahaan lahayd wada hadaladii Turkiga Somaliland iyo Somalia ugu socday, daqiiqad walba madaxweynuhu wuu la socon laha!! Horeba waxa in badan la isweydiiyey xukuumaddeenu qadiyadda gooni isutaagay daacad kama aha. Bal labada arrimood miisaanka saara oo is barbar dhiga; iyama dalka iyo dadkab manaafacaad u leh?
Xaqiiqada safarka madaxwweynuhu waxa weeyey: Dheeshii oon weli garsoorihii siidhigii afuufin ayaan ka hor degeyaa; waa bilowgii ololihii doorashadan aan laba hubin xikliga ay qabsoomi doonto; waa qodob ka mid ah intii qarsoonayd ee Shirkii Gar-adag.
Gebagebadii waa halku dhigii Aw Salawaat Bulsho Sawire:
“Haldhaanwado: Wixii shirbeeleed qabsoomay inta ay xukuumadan Siiraanyo xilka qabatay malaaiiktu ha kudarto miisaanka xasaanaadka ee shirkii Gar adag.”